トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Hanemono Kulungile imfundiso umngcele?
Eminyakeni yamuva, ngoba esikhishwe magazini eziningi pachinko, ulwazi sekulula ngakho ukungena isandla. Ngakho, uma umuntu hit pachinko, kanye, mina think're nesithakazelo kokubona ukuthi wabona ngithi umngcele theory.
Lapha, imfundiso umngcele, ngingathanda sibheke. Okokuqala, ngaphambi indaba kwemfundiso yokuziphendukela umngcele, kukhona into okuyinto kuthiwa emnceleni. Umshini pachinko, kukhona big hit okungenzeka, ngokulandelana. Umugqa umngcele, uma jackpot e jackpot okungenzeka esitaladini umshini, lemali ukuthi selishintshiwe lemali futhi wenkokhelo ukuthi utshalomali, uthi iphuzu legatsha ukuba plus noma lokususa 0.
esimweni pachinko is, lo mugqa komngcele, big hit okungenzeka kanye Chang ukukhulumisana isilinganiso, njll, kabusha ibalwa kusukela ezihlukahlukene amanani ezinombolo, lubonakaliswa njengoba inombolo linemibhikisho we yen ayizinkulungwane. umshini pachinko okungukuthi, ngaphandle nangaphakathi, ukuphinda noma cha ngaphandle, sikwazi ukuze bukhomba ematfuba jackpot ukuthi imisiwe.
Ngakho, hit emgqeni umngcele noma kufa ngaphezulu imisiwe ngenxa emshinini ngamunye, lapho bukhomba ku ematfuba isethi jackpot kumshini, ngoba ukuthi inzuzo, 's umbono umngcele theory.
ngokuqinisekile, kwakuthiwa, kodwa ngicabanga ukuthi othile wawuyoba amanxiwa ngakho, akayi kuba empeleni ukwenza lokhu kahle kakhulu. Ekhuluma kungani, pachinko eshintsha iye yenziwa izinzipho kushintshwe esitolo. Pachinko eshintsha wena ukulungiswa nail mgwaqo komngcele line, kubonakala sengathi akukho ekuseni.
uma nail ngokuqinisekile evulekile emhlabeni ekuqaleni, uma ucabanga ukuthi kukhona ngaphandle kwemingcele, njll Uma some nail ukulungiswa azungeze umhlaseli, kwase zilungisiwe, ezifana nokususa ibhola kuyinto, ngisho noma uqale emhlabeni, ukunciphisa wenkokhelo kuyoba ngokushesha. Uma kuziwa
yonke wenkokhelo, kuphela ukuvula nail kuphela endaweni kokuqala, mina into iba enganele. Ukuze uziqeqeshe lo mbono umngcele, ahlelwe ubuso ibhodi thina, sibheke yonke ukulungiswa nail, kunciphisa amabhola Udinga ukukhetha itafula elincane.
ngangokunokwenzeka eside elindelwe out ibhola, ngaphandle ukunciphisa, uma ungehleli kwagadla enkulu elandelayo, kodwa uma ubheka ingqikithi ibhalansi ukukhokhelwa, iba engakhi, ngoba imfundiso yokuziphendukela umngcele ayisekho wanelisekile.
Nokho, is ukuthi of pachinko ukubeka lo mbono umngcele in ekhanda lami, ukuze ngizuze Ngicabanga ukuthi ngempumelelo kakhulu. Endabeni pachinko okungukuthi, ngesikhathi lo convergence kuya big hit okungenzeka, ukuze senze imali ukubaluleka kwamanani ka engenamsebenzi hhayi ukuphendula lesi kakhulu yen ayizinkulungwane ephansi.
ukuqondisa ijubane layo uma igijima ukujikeleza, uma sikhetha yesikhulumi, kuka zifa ukudubula Ngicabanga ukuthi umphumela uba muhle. Ukuze uziqeqeshe imfundiso yokuziphendukela umngcele, ukuthatha isikhathi, udinga ukuqoqa idatha futhi kwenziwe phezu isikhathi eside.
Nokho, kusukela kwagadla ngemcondvo, kungenzeka ukuthi kukhona kuwufanele ngizame.